အဝါရောင်လိပ်ပြာ အဓိပ္ပါယ်- ဝိညာဉ်ရေးရာလျှို့ဝှက်ချက်များ [အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော 2021] - လက္ခဏာများ
အုန်းသီး Toast လုပ်နည်း
လွယ်ကူသောညစာအတွက် ၇၀ အရသာပုစွန်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Hallmark ၏ ၂၀၂၀ ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်ဤတွင်ရှိသည်
အဝါရောင်လိပ်ပြာ အဓိပ္ပာယ် - သင်္ကေတနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာ
အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် မျှော်လင့်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ဝိညာဉ်၏သင်္ကေတ အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၌။ မင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျံဝဲနေတဲ့ အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို မြင်ရင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဝါရောင်လိပ်ပြာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အကောင်းမြင်ပါတယ်။
လိပ်ပြာများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယုံကြည်ခြင်း နှင့် အသွင်ပြောင်းခြင်း။ . လိပ်ပြာတစ်ကောင်စီသည် ၎င်းနှင့်အတူ အထူးသတင်းစကားများ သယ်ဆောင်လာသည်။ လိပ်ပြာများသည် ပုံဆောင်သဘောအရ နက်နဲပြီး အစွမ်းထက်သော အသက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ယဉ်ကျေးမှုများစွာသည် လိပ်ပြာကို ဝိညာဉ်များနှင့် ဆက်စပ်သည်။
လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကိုမြင်ရခြင်းသည် သင်ကြုံတွေ့နေရပြီ သို့မဟုတ် သင့်ဘ၀တွင် ပင်လယ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အပြောင်းအလဲများကို တွေ့ကြုံခံစားရတော့မည်ဟု ဆိုလိုနိုင်သည်။
လိပ်ပြာက သင့်ကိုပြောပြဖို့ သတိပေးချက်တစ်ခုအနေနဲ့ လာတာပါ။ နောက်ဆုံးတော့ အရာအားလုံး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ . သူတို့သည် သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက် နှင့် အချစ် . အဝါရောင်လိပ်ပြာများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးထွားမှု၊ ကြွယ်ဝမှုနှင့် ကြွယ်ဝမှုများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် ဘဝအသစ်၊ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း သို့မဟုတ် အသွင်ကူးပြောင်းခြင်း၏ သင်္ကေတလည်းဖြစ်သည်။
လိပ်ပြာတွေရဲ့ ကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေက အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် အများအားဖြင့် ဇွဲ၊ အားမာန်၊ အကောင်းမြင်မှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာ ဆိုသည်မှာ မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများတွင် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာကိုကြည့်ခြင်းမှာ မတူညီသော ယဉ်ကျေးမှုများတွင် မတူညီသော အဓိပ္ပါယ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေက ဘာတွေပြောနေလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အိုင်ယာလန်ယဉ်ကျေးမှုတွင် အဝါရောင်လိပ်ပြာ၏ အဓိပ္ပါယ်
အဝါရောင်လိပ်ပြာများသည် ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ရသူ၏ဘဝတွင် ငြိမ်းချမ်းစွာအနားယူနေကြကြောင်း အိုင်ယာလန်ရိုးရာပုံပြင်များက ယုံကြည်ကြသည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာကိုမြင်ရခြင်းသည် ကွယ်လွန်သူ၏ ဆွေမျိုးများနှင့် မိတ်ဆွေများအတွက် များစွာကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် အဝါရောင်လိပ်ပြာ၏ အဓိပ္ပါယ်
တရုတ်လူမျိုးများက အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ သင်္ကေတဖြစ်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလူနှစ်ဦး၏ နှလုံးသားအတွင်း၌ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုကြသည်။ စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် လေးနက်စွာ မြတ်နိုးပါသည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာကို သက်သေခံခြင်းသည် ဤရှေးဟောင်းတိုင်းပြည်တွင် ကံကောင်းခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။
စကော့တလန်တွင် အဝါရောင်လိပ်ပြာဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
စကော့တလန်တွင် အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကွယ်လွန်သူ၏ အနားယူရာနေရာအနီးရှိ အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် ဝိညာဉ်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကောင်းမွန်သောနေရာတွင် ရှိနေသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။
Marine Legends အရ Yellow Butterfly အဓိပ္ပာယ်
ရှေးသင်္ဘောသားတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီတွေအရ သင်္ဘောသားတစ်ဦးဟာ အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်နဲ့ ထိတွေ့မိတဲ့အခါ သူ့ရဲ့ခရီးမှာ သေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ သေချာတာကတော့ သင်္ဘောသားတွေအတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေးဂရိယဉ်ကျေးမှုတွင် အဝါရောင်လိပ်ပြာများသည် စတင်မှုအသစ်ကို အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သည်။ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း။ ထို့ကြောင့်၊ အဝါရောင်လိပ်ပြာများစွာကို မြင်တွေ့ရခြင်းသည် ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက သေဆုံးသွားသူများ၏ ဝိညာဉ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤဒဏ္ဍာရီသည် လိပ်ပြာများ၏ ပုံမှန်သဘောတူထားသော သင်္ကေတ အဓိပ္ပာယ်များနှင့် ကောင်းစွာ ဆက်စပ်နေသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာ သင်္ကေတသည် ဇာတိအမေရိကန် အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှု
Native American ယဉ်ကျေးမှုတွင် လိပ်ပြာသည် တန်ဖိုးရှိသော သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်မှု နှင့် နိမိတ်လက္ခဏာ မျှော်လင့်ချက် . မွေးကင်းစ အမေရိကန်လူမျိုးများသည် သဘာဝတရားမှ လမ်းညွှန်မှုကို ရယူခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ဘဝများသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တိရစ္ဆာန်များ၊ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ရှုပ်ထွေးစွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဝါရောင်လိပ်ပြာ၏ အဓိပ္ပါယ်အမှန်ကို နားလည်ခဲ့ကြသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။
အခြားယဉ်ကျေးမှုများတွင်၎င်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောသင်္ကေတဖြစ်နိုင်သည်။ ကမ္ဘာဟောင်းတွင် လိပ်ပြာသည် လူသေများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လမ်းညွှန်မှုအတွက် ပိုစဉ်းစားရတာကို သဘောကျတယ်။
အဝါရောင်ကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် အဖိုးတန်သတ္တုရွှေကိုရည်ညွှန်းသည့် ဟေဗြဲစကားလုံး 'charuts' ဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်။ အဝါရောင်သည် ခေတ်အဆက်ဆက် ဉာဏ်ပညာနှင့် ဉာဏ်ရည်အတွက် ရပ်တည်ခဲ့သည်။
၎င်းသည် ယုတ္တိဗေဒ၊ မှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် ဆက်သွယ်မှုတို့ကို ကူညီပေးသည်။ အဝါရောင်သည် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ပြည့်ဝသည်။ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကြည်လင်မှုနှင့် နေရောင်ခြည်တို့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
၂၁ ကောင်းကင်တမန် နံပါတ်အမွှာမီးလျှံ
၁ ပေတရု အခန်းကြီး ၁ နှင့် အခန်းငယ် ၇ (၁ ပေတရု ၁:၇) တွင် အဝါရောင် သို့မဟုတ် ရွှေရောင်အကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။ ပေတရုကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် စုံစမ်းခြင်းအကြောင်းပြောထားပြီး၊ ယုံကြည်ခြင်း၏စမ်းသပ်မှုများသည် မီးဖြင့်ကြိုးစားသော ရွှေထက်သာလွန်လိမ့်မည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်၊ အဝါရောင်/ရွှေသည် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် မီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ယင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ရွှေ သို့မဟုတ် တန်ဖိုးကြီးသောအရာကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဆာလံ ၆၈:၁၃) သို့မဟုတ် နူနာ သို့မဟုတ် နူနာရှိခြင်း (ဝတ်ပြုရာ ၁၃:၃၀၊ ၃၂၊ ၃၆)။ မင်းရဲ့အခြေအနေမှာ မင်းရဲ့ပြဿနာတွေက မီးတွေပဲ။ ဒီပြဿနာတွေက မင်းရဲ့ စရိုက်နဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ် ဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်။ သန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ ရွှေထက်နည်းသော သင်အသစ်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသော ယေရုရှလင်မြို့သစ်တွင် အုတ်မြစ် ဆယ့်နှစ်ခု ပါရှိပြီး တစ်ခုစီသည် အဖိုးတန်ကျောက်မြတ်ကို အခြေခံ၍ မတူညီသော အလင်းတစ်မျိုးစီ ထွန်းလင်းစေသည် (ဗျာဒိတ် ၂၁း၁၉)။
သတ္တမအုတ်မြစ် (ခုနစ်ချက်သည် ပြီးပြည့်စုံမှုအရေအတွက်) သည် ၎င်းအတွင်း၌ Chrysolite ရှိသည်။ chrysolite ဟုပြန်ဆိုထားသော ဂရိစကားလုံးသည် ရွှေ သို့မဟုတ် အဝါရောင်နှင့်တူသော ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကိုမြင်ရခြင်းက သင်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖို့ ကူညီပေးမယ့် ကောင်းချီးတွေနဲ့ ရေချိုးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အရေးပါသော သင့်ဘဝတွင် ကြီးကျယ်သော အရာများ ဖြစ်ပျက်တော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် အဝါရောင်လိပ်ပြာလေး မြင်လိုက်ရသည့် လက္ခဏာကို လစ်လျူမရှုပါနှင့်။
ပိုပြီးဖတ်ပါ: မြင်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကြည့်ပါ။ လိပ်ပြာနက် နှင့် လိပ်ပြာဖြူ .
စူးစမ်းလေ့လာရန် ကြီးမားသောအရာတစ်ခုကို သိမ်းဆည်းထားသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရရင် ဖိအားတွေ ခဏခဏခံမယ့်အစား စိတ်အေးလက်အေး အနားယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ ညွှန်ပြနေနိုင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့ ကံဆိုးမှုတွေက မကြာခင် ကံကောင်းခြင်းတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတော့မယ်။
စောင့်မျှော်နေသော သတင်းကောင်းသည် သင့်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရရင် နောင်လာမည့် အဖြစ်အပျက်တွေက သင့်အတွက် အကျိုးရှိနိုင်တာမို့ အဲဒီထဲက အမြတ်အများဆုံးထုတ်ယူနိုင်မှာပါ။ ငွေရေးကြေးရေး ပြဿနာတွေက မင်းကို ဒုက္ခမပေးတော့ဘူး။
လောလောဆယ်၊ ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် သင်လက်တိုကောက်ဖြစ်ရမယ်။ ဒီပြဿနာက သင့်ကိုယ်သင်၊ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို မလုပ်မိအောင် တားဆီးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဟုတ်တော့ဘူး။
မကြာခင်မှာ သင်ဟာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။
မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေရှိနေရင် အဝါရောင်လိပ်ပြာကိုတွေ့ရင် အဆိုးမြင်စိတ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတော့မှာ ဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ မင်းရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်တော့မယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို မကြောက်ပါနဲ့။ အဆုံးမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှဟာ အကောင်းအတိုင်းဖြစ်လာတယ်။
အဝါရောင် လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို မြင်ခြင်းဆိုသည်မှာ သင်သည် ဝိညာဏဉာဏ်အလင်းနှင့် နိုးကြားခြင်းဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာများသည် စွမ်းအားကြီးမားသော ဝိညာဉ်ရေးသတင်းများကို သယ်ဆောင်ကြသည်။
အဖြေမရသေးသော ဆုတောင်းချက်များအားလုံးကို မကြာမီ အဖြေပေးပါမည်။ ကြီးမားသောဝိညာဉ်ရေးကြီးထွားမှုကို သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား စောင့်ကြည့်နေပြီး သင်၏ဆုတောင်းချက်များကို နားထောင်ပေးနေသည့် ဘုရားသခင်ထံမှ သတင်းစကားများကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။
သင့်ဘဝ၏မြင့်မြတ်သောရည်ရွယ်ချက်ကို မီးမောင်းထိုးပြမည်ဖြစ်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက ဝိညာဉ်ရေးအရပါ ကြီးထွားရန် အရေးကြီးကြောင်း မမေ့ပါနှင့်။
သို့မှသာ သင့်ဘဝ၏ တာဝန်ကို တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီး သင့်ကံကြမ္မာပိုင်ဆိုင်သည့်နေရာကို ကိုယ်တော်လမ်းညွှန်ပေးသည့်နေရာကို ယုံကြည်ပါ။ သင်သည် ဘုရားသခင်ထံမှ ၀ိညာဉ်ဉာဏ်အလင်းပေးသည့် သတင်းစကားကို လက်ခံရရှိသည့် ကံကောင်းသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို မည်သည့်စရိတ်နှင့်မျှ မဖြုန်းတီးပါနှင့်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို တွေ့လိုက်ရရင် လိပ်ပြာက မင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့နေ့ရက်တွေအကြောင်း သတိပေးဖို့ရောက်လာတယ်၊ အဲဒါက မင်းရဲ့ကလေးဘဝအကြောင်း မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
သင်သည် လက်ရှိအခြေအနေဆိုးများ ကြုံတွေ့နေရပါက ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက်မျိုး မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် ကလေးဘဝနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်၏အတိတ်အမှတ်တရများကို ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့ထံမှ တစ်စုံတစ်ရာကို သင်ယူနိုင်ရန် သတိပေးချက်တစ်ခုအဖြစ် လာပါသည်။ ဇွဲမလျှော့သင့်ဘူး။ မင်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကို ဘယ်တော့မှ မသေပါစေနဲ့။
သင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းတွေးနေတယ်ဆိုရင် အဝါရောင်လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရင် သူတို့လည်း သင့်အကြောင်းတွေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကောင်းတွေကို ထိုင်ပြီး အမှတ်ရနေမယ့်အစား သင်လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းဟောင်းဆီ ပြန်သွားရမယ့် အချိန်ပါပဲ။ ပြန်ပျော်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။
ဤကဲ့သို့သော နောက်ထပ်မက်ဆေ့ဂျ်များကို ရှာဖွေပြီး ၎င်းတို့နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ပါ။
အနက်ရောင်နှင့် အဝါရောင် လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို မြင်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။
အနက်ရောင်နဲ့ အဝါရောင် လိပ်ပြာကို မြင်တဲ့အခါ ကျားမျိုမြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤအရာများသည် မျိုးကွဲပေါင်း 500 ခန့်ပါဝင်သည့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလိပ်ပြာများဖြစ်သည်။
သာမာန်အားဖြင့် တွေ့ရခဲပါတယ်။ အဝါရောင်နဲ့ အနက်ရောင် လိပ်ပြာတစ်ကောင်ကို မြင်လိုက်ရလို့ ဒီမှာရှိနေရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာရတော့မယ်လို့ ဝိညာဉ်ရေးအရ ညွှန်ပြပေမယ့် သတိပညာရှိဖို့လိုတယ်။
အထီးသည် ၎င်း၏တောင်ပံများအလယ်တွင် အစက်အပြောက်များရှိပြီး လာမည့်ရက်များအတွင်း အရေးကြီးသည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေရှိကြောင်း အထီးများက ညွှန်ပြနေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာကို အိပ်မက်မက်ခြင်းသည် နက်နဲသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ အဝါရောင်လိပ်ပြာသည် အကူးအပြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤအကူးအပြောင်းများသည် သဘာဝတွင် အပြုသဘောဆောင်ဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘဝ၏ ရှုထောင့်တစ်ခုမှ ထွက်ခွာတော့မည် သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ကာ သင်၏ စစ်မှန်သော အလားအလာကို ဖော်ပြမည့် အသစ်တစ်ခုကို လက်ခံရယူတော့မည်ဖြစ်သည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာအိပ်မက်သည် သာယာအေးချမ်းသော ဘဝတစ်ခုကို ခိုင်မြဲစေသည်။ မကြာသေးမီက သင်သည် ပြဿနာများစွာဖြင့် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ကဏ္ဍသစ်တစ်ခု ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်ယခုလက်ရှိဖြစ်နေသကဲ့သို့ သင်သည် အကူအညီမဲ့နေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ခိုင်ခံ့ပေမယ့် လှပတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် မင်းပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ သင်သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ သင်၏ စရိုက်လက္ခဏာ၏ အစွမ်းသတ္တိမှာ မဆိုစလောက်ဖြစ်သည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာအိပ်မက်က မင်းကို မေ့မရတဲ့အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ ကလေးဘဝအမှတ်တရတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုအမှတ်တရများနှင့် အဖြစ်အပျက်များကို တွေးတောခြင်းက မြတ်နိုးဖွယ်အမှတ်တရများကို သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်ရှည်လများ မေ့ပျောက်ခဲ့သော အနှစ်သက်ဆုံးလူကို သင့်နှလုံးသားနှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် ငြိမ်သက်နွေးထွေးမှု ပေးဆောင်လာစေရန် အလွန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
အဝါရောင်လိပ်ပြာများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားအားလုံးတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်လိပ်ပြာသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဝါရောင်ဖြစ်ပြီး Colias Crocea ဟုခေါ်သည်။ သူတို့က ဥရောပမှာ အဖြစ်များတယ်။
အချို့သောမျိုးစိတ်များသည် အတောင်များ၏ အပေါ် သို့မဟုတ် အောက်ဘက်များကို ကြည့်ပါက အပိုင်းတစ်ခုထက်ပို၍ ကွဲပြားနေပါသည်။ မျိုးစိတ်တစ်ခုစီ၏ အကွာအဝေးနှင့် တောင်ပံအရွယ်အစားတို့လည်း ပါဝင်သော်လည်း ဤအချက်အလက်သည် ကြမ်းတမ်းသော ယေဘုယျဖော်ပြချက်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း လုံးဝတိကျမှုမရှိပါ။
▪︎ အနောက်တိုင်းကျား Swallowtail (Papilio rutulus) ဤမျိုးစိတ်များကို အများအားဖြင့် အနောက်မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ British Columbia မှ တောင်ဘက် New Mexico နှင့် Baja California တောင်ပိုင်းအထိ တွေ့ရတတ်သည်။ အရှေ့ဘက်မှ တောင်ဒါကိုတာ အနောက်ဘက်နှင့် အရှေ့တောင်ဘက် ကော်လိုရာဒို။ Nebraska အလယ်ပိုင်းသို့ ရှားပါးသော လမ်းလွဲတစ်ခု။
▪︎ လိမ္မော်ရောင် တားမြစ်ထားသော ဆာလဖာ (Phoebis philea) : အများအားဖြင့် ဘရာဇီး မြောက်ပိုင်းမှ ဖလော်ရီဒါ ကျွန်းဆွယ်အထိ နှင့် သော့များ။ တက္ကဆက်တောင်ဘက်မှာလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် Colorado၊ Minnesota၊ Wisconsin နှင့် Connecticut တို့တွင်ရှိသည်။
▪︎ တိမ်အဝါရောင် (Colias croceus) - အင်္ဂလန်၊ အိုင်ယာလန်၊ စကော့တလန်နဲ့ ဝေလနယ်တွေမှာ တွေ့ရတယ်။
▪︎ Common Brimstone (Gonepteryx rhamni) - အာရှ၊ ဥရောပနှင့် မြောက်အာဖရိကတို့တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော အဝါရောင်လိပ်ပြာဖြစ်သည်။
▪︎ အမြီးနှစ်ချောင်းရှိသော Swallowtail (Papilio multicaudata) - အနောက်မြောက်အမေရိကတိုက်တွင် ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာမှ တောင်ဘက်၊ အရှေ့ဘက် နီဘရာစကာအလယ်ပိုင်းနှင့် တက္ကဆက်အလယ်ပိုင်း၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှတဆင့် တောင်ဘက်တွင် တွေ့ရှိရသည်။
▪︎ မြီးသုံးချောင်းကျား (Swallowtail) - မက္ကဆီကိုတွင် တွေ့ရှိရသည်။
▪︎ Birdwing ဘုံ
▪︎ Birdwing၊ ရွှေရောင်
လိပ်ပြာပေါ်တွင် မြင်နိုင်သော အဝါရောင် ကွဲပြားမှုကို သင်စဉ်းစားပါက-
နှင့်အခြားများစွာ !! သင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လိပ်ပြာရဲ့ အရွယ်အစားကနေ အရောင်အသွေးနဲ့ အတောင်ပံတွေအထိ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မှတ်သားထားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ၎င်းသည် သယ်ဆောင်လာသော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
လိပ်ပြာများတွင် ထိုကဲ့သို့ မှော်ဆန်သည့် အရည်အသွေးနှင့် တည်ရှိနေခြင်းကို သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့၏ဘဝခရီးလမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းကို အလွန်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
လိပ်ပြာ၏ သံသရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ သင်္ကေတနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ရရှိထားသည်။ လိပ်ပြာအမျိုးအစားအားလုံးသည် မတူညီသော မက်ဆေ့ခ်ျများကို သယ်ဆောင်ကြသည်။
လိပ်ပြာကူးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ မင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားရှာဖို့အတွက် မင်းဘဝရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ပညာရှိဖို့ လိုပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နတ်သမီးများသည် ၎င်းတို့၏ရောက်ရှိနေခြင်းကို သတိပေးရန်နှင့် အချက်ပြမှုများပေးပို့ရန် လိပ်ပြာများကို အသုံးပြုကြသည်။ မင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခရီးတစ်လျှောက်မှာ မင်းကိုလမ်းပြဖို့ သူတို့က ဒီမှာရှိတယ်။
ကောင်းကင်တမန် နံပါတ်များ အသွင်အပြင်ကဲ့သို့ သဲလွန်စများကို အချိန်တိုင်း စူးစမ်းရှာဖွေရပါမည်။ အခွင့်အခါမရွေး ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ သူသည် သင့်ဘဝတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အံ့ဖွယ်အမှုများအားလုံးကို တုံ့ပြန်ပေးသူဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ 'firefly Lane' တွင်ဂျော်နီ၏အသံထွက်သည်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်
'ဒီဒီ' တွင် Ree သည် Hoda နှင့် Savannah ကိုနှိမ်နင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဘလူးဘယ်ရီ Cobbler စိတ္တဇကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်
၃၆ ကောင်းကင်တမန် နံပါတ်အမွှာမီးလျှံ
puff pastry နှင့် ကြက်သားပေါင်မုန့် ရှေ့ဆောင် အမျိုးသမီး
ကြက်ဥပြုတ်ကို အခွံနွှာရလွယ်ကူအောင် ပြုလုပ်ပါ။
ပါးလွှာသော ribeye steaks ချက်ပြုတ်နည်း
မြက်ခင်းပြင်ပေါ်က အိမ်လေးကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ